5 aaladda naqshadeynta garaafka oo leh muuqaal muuqaal weyn leh. Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | General, Sawirro, Dhiirrigelinta
Haddii aad rabto inaad la kulanto yoolalkaaga suuq-geynta internetka, waxaad marka hore u baahan tahay inaad fahamto waxa cunsurrada muuqaalku awood leeyihiin marka ay timaado qabashada dareenka isticmaalayaasha iyo helitaanka jawaab weyn, maadaama aad ogtahay in guud ahaan, dadku ay yihiin uunsi muuqaal leh.
Sawiradu waxay u adeegaan calaamadaha, si ay ugu sheegaan sheekadooda una gudbiyaan farriin. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay adeegsanayaan noocyada ganacsiga software ganacsiga muuqaalka ah kuwaas oo soo bandhigaya sawirro macaamiil soo jiidasho leh, gaar ahaan marka loo adeegsado macnaha saxda ah, ka xanaajiso iibka.
1 Xaqiiqdii, waxay si togan u saameeyaan go'aamada wax iibsiga
Xaqiiqdii, waxay si togan u saameeyaan go'aamada wax iibsiga
Maskaxda bini-aadamka waxaa la tusay inay ka shaqeyso sawirro 60.000 jeer ka dhakhso badan qoraalka. Dhinaca kale, daraasad ay dhowaan samaysay shirkadda Microsoft Corp. ayaa muujisay in shakhsiyaadku lumiyaan feejignaanta 8 ilbidhiqsi kadib.
Tani waxay ka dhigaysaa ah nuxurka muuqaalka, maadaama ay u baahan tahay fiiro gaar ah si loo fahmo waxa aad rabto inaad gudbiso. Iyadoo aan loo eegin hadafkaagu waa khadka tooska ah, haddii aad kordhineyso beddelaaddaada, inaad kasbato kuwa raacsan ama aad kordhineyso isku dayga inaad kordhiso waxqabadka SEO-gaaga, waxaad u baahan tahay qalabka naqshadeynta garaafka si aad u abuurto waxyaabo muuqaal ah oo dhagaystayaashaadu jeclaan doonaan, markaa fiiro gaar ah u yeelo qalabkan si aad u bilaabi karto.
Maanta badiyaa waa la isticmaalaa sawirada si loo matalo macluumaadka isku dhafan qaab qancin leh oo fudud. Soo-booqdayaasha websaydhkaagu waxay u badan tahay inay cunaan waxyaabahaaga oo ay si buuxda u fahmaan xogtaada, haddii ay ku jiraan waxyaabo garaaf ah.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Piktochart waa in ay leedahay qalab infographic ah oo jiidaya oo dhacaya. Waxay kaloo leedahay in ka badan 600 shey mid gaar ah oo ku siinaya naqshadda aad ugu baahan tahay inaad ku gudbiso sheekadaada.
Xitaa waad ku soo bandhigi kartaa boggaaga macluumaadka muuqaal ah, maaddaama Piktochart ay ku jiraan khariidado, astaamo, sawirro, iyo fiidiyowyo warshadahaaga ah.
Uma baahnid inaad noqotid qof bilow ah si aad awood ugu yeelatid inaad sameysid muuqaallada vector-ka. Haddii aad u baahan tahay tifaftire tifaftire, Vectr ayaa noqon doona xulashadaada ugu fiican maadaama aad heli doontid muuqaallo muuqaal ah oo nadiif ah, mockups-ka websaydhada iyo bandhigyo kale iyadoon loo eegin waxa aad isticmaaleysid iyo waxa ugu fiican ayaa ah inay tifaftiraha garaafka aasaasiga ah waa lacag la'aan.
Ma haysaa barnaamij naqshadeynta garaafka oo adag oo aad isticmaali karto? Waxaa laga yaabaa inaadan ahayn qof farsamo yaqaan ah, laakiin waxaad leedahay dhadhan farshaxan oo kugu filan sawirada tayada leh ee ka hadlaya adiga iyo shirkaddaada.
Xulo Canva haddii aad u baahan tahay inaad u sameyso sawirro baraha bulshada ee kala duwan, suuqgeynta warbaahinta bulshada ama inaad ka sameysato taraafikada boggaaga.
Si aad u siiso xulashooyin dheeraad ah oo ku habboon noocaaga, waxaad kala dooran kartaa inta u gaarka ah xulashada qoraalka, qaababka, naqshadaha hal-abuurka ah iyo waxyaabo kale oo cabsi badan. Xitaa waad ku casuumi kartaa ilaa 10 xubnood oo bilaash ah si ay uga wada shaqeeyaan naqshadaha iyo faylalka la wadaago.
Lagu kalsoon yahay hogaamiyaasha caanka ah ee caalamiga ah, Stencil wuxuu ka caawiyaa dadka wax qora iyo kuwa wax ku iibiya inay abuuraan sawirro buuxa si waxtar leh oo sahlan. Stencil waxaa loo sameeyay ugu horreyntii inay kaa caawiso inaad ka qaybqaadasho badan oo bulsheed ka hesho dhammaan aaladaha warbaahinta bulshada iyada oo loo marayo qalabkeeda garashada leh.
Si loo siiyo xorriyad abuur badan, wuxuu leeyahay in ka badan 200 oo arrimo, in ka badan 1.900 noocyada websaydhka ah iyo boqollaal kun oo astaamo iyo sawirro ah.
Qalab kale oo naqshadaysan oo ay tahay inaadan ka maqnaan waa Easel.ly, maaddaama qalabkani uu hagaajinayo hannaanka loo abuurayo sawir-gacmeedka tiro aad u tiro badan qoraal, muuqaal iyo naqshad xulashooyinka laga kala dooran karo. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ka samaysato waxyaabaha aad ka kooban tahay xoqidaada ama aad xulato arrimo ku habboon oo sidoo kale wax laga beddeli karo.
Waxay leedahay mawduucyo kala duwan oo infographic ah, sida infographics oo ku saabsan farshaxanka bulshada, kaliya waa inaad aadaa degelkeeda si aad u abuuri karto muuqaalka muuqaalka ah ee aad u baahan tahay iyadoo aan loo eegin mawduuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 5 aaladda naqshadeynta garaafka oo leh muuqaal muuqaal weyn leh